Accueil > Gazetin'ny nosy > IRD : Hatanjaka saingy halemy lohalika
IRD : Hatanjaka saingy halemy lohalika
Amin’ny faha 27 novambra 2019 izao no hifidy izay ho ben’ny tanàna eto Madagasikara isika. Ny kaominina izay rafi-panjakana manakaiky indrindra ny vahoaka. Na inona na inona fitondram-panjakana nisy teto amin’izao tontolo izao dia tsy mba niova ny kaominina fa nitazona ny toerany hatrany na dia nifandimby aza ny firehan-kevitra tsy mitovy teo amin’ireo mpanao pôlitika. Na dia nisy aza ny fanovana ny anarany dia tsy nampiova ny asa natao tao amin’ity vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ity.
Afaka mampandroso mivantana ny faritra misy azy ny kaominina satria sady mahaleo tena izy ireny amin’ny fitantanana ny volany no manana ny rafitra mpanao lalànany sy ny mpanatanteraka amin’izany.
Ity vondrom-bahoaka itsinjarampahefana ity no be olona hofidina indrindra. Ny kaominina, fa indrindra ny ben’ny tanàna izay mitantana sy mitondra ny kaominina no sehatra iray izay fanehoan’ny antoko pôlitika ny heriny. Arakaraka ny fananany ben’ny tanàna be indrindra no mahamarin-toerana ny fanjakana iray.
Ankehitriny ary dia mihazakazaka nilatsaka hofidiana ho ben’ny tanàna amin’ny alalan’ny IRD (Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina) ny mpanao pôlitika rehetra manerana an’i Madagasikara. Indrindra fa ireo any ambanivohitra sy ambany ravinkazo rehetra any. Ny kandidà sasany aza rehefa tsy lany tao amin’ny fanolorana ho kandidàn’ny IRD dia nijanona tsy hifaninana intsony.
Midika izany rehetra izany fa tsy maintsy ny IRD no ben’ny tanàna ho be indrindra amin’ity fifidianana ity. Tsy azo iadian-kevitra izany satria izay no lôjikan’ny pôlitika amin’izao fotoana izao. Mazava koa fa tena osa dia osa ny mpanohitra eo anatrehan’ny IRD ity.
Ny fananana be n’ny tanàna maro nefa tsy ahazoana milaza fa matanjaka ny fanjakana iray. Indrindra fa amin’izao fotoana izay fanaovana pôlitika tsy manara-penitra izao. Iaraha-mahita fa olona tsy mitovy hevitra sy tsy mitovy fomba fijery ny ankamaroan’ireo kandidà izay nilatsaka ho ben’ny tanàna ao amin’ny IRD ireo. Tsara ihany ny amerenana ny firehana sy fijery samihafa misy amin’ity vondrona pôlitika izay manohana an’i Andry Nirina Rajoelina ity ankehitriny. Maro amin’izy ireo no jiolahy pôlitika. Izany hoe ireo izay tsy miraharaha raha tsy hahazo toerana fotsiny ihany. Tsy miraharaha izay IRD any fa ny mahay azy dia ny ho ben’ny tanàna na amin’ny fomba ahoana na amin’ny fomba ahoana. Ireo no lazaina koa hoe mpamadika palitao.
Maro amin’izy ireny koa no olona efa naloan’ny vahoaka sy ratsy fitondran-tena teo amin’ny fiaraha-monina. Nanararaotra ny savorovoro pôlitika nisy teto amin’ny firenena sy ny tsy fahaizan’ny mpitondra teo aloha nitantana fanjakana.
Tsy vitsy koa no mpangalatra sy mpanodinkodina volam-bahoaka tamin’ny sehatra maro niasany teo aloha ka manararaotra izany amin’ny fidirana ao amin’ny antokom-panjakana sao mba hisy mpiaro.
Ireo rehetra ireo no malaza manerana an’i Madagasikara amin’izao fotoana izao amin’ny fametrahana kandidà izay ho ben’ny tanàna ao amin’ny IRD izao. Tsy vitan’izany fa mbola miampy ady an-trano izay tsy izy ny raharaha satria mifampitory aty amin’ny foibe ny antoko TGV (Tanora Malagasy Vonona) sy ny Mapar (Miaraka amin’ny Filoha Rajoelina) izay antoko pôlitika fototra an’ny IRD ary manohana an’i Andry Nirina Rajoelina.
Ny ady an-trano ity no tena olana lehibe amin’ny fanjakana ankehitriny ka mety hampananosarotra ny fanatanterahan’ingahy Andry Nirina Rajoelina ny velirano-13 sy ny IEM (Initiative pour l’émergence de Madagascar).
Mila manova fihetsika sy fomba maika ny mpikambana ao amin’ny IRD fa indrindra ireo “Coordo” sy ny “SN” izay mpandrindra ity antoko sy vondrona ity any amin’ny faritra sy ny distrika satria be loatra ny fimenomenonana ataon’ireo mpikatroka IRD ireo amin’ny faritra maro manerana ny nosy.
Izany no ilazana fa matanjaka saingy halemy lohalika ity vondrona pôlitika sy fikambanana IRD izay manohana ny fanjakana ankehitriny ity. Mila mitandrina mafy noho izany ny fanjakana Rajoelina satria be ny mpisoloky sy ny mpamandrika amin’ireo olona IRD ireo.